पत्रकार महासंघमा नेतृत्व स्थापित गर्न किन मच्चदैंछ रडाको ? – BRTNepal
पत्रकार महासंघमा नेतृत्व स्थापित गर्न किन मच्चदैंछ रडाको ?
बिआरटीनेपाल २०७४ साउन २५ गते ११:१३ मा प्रकाशित
नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औं महाधिवेशन नजिकिदै जाँदा नेतृत्वको लागि रोचक प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ । पत्रकार सम्वद्ध संस्थाहरु आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने होडबाजीमा देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेस निकट प्रेस युनियन, एमाले निकट प्रेस चौतारी र माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर मध्य कस्को चुनावी गठबन्धन बन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ ।
सेन्टर भित्रै आचार्यको विरोध
अध्यक्षका रुपमा अघि सारिएका आचार्यको सेन्टर भित्रै चर्को विरोध सुरु भएको छ । महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहिसकेका आचार्य प्रेस काउन्सिल सदस्य, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष र पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनका प्रेस सल्लाहकार थिए । सधै लाभको पदमा रहेर पनि अहिले महासंघको अध्यक्ष हुने चाहना राखेर सेन्टरका अन्य पत्रकारको नेतृत्वमा पुग्ने चाहनालाई कुन्ठित गरेको भन्दै विरोध भएको हो । सेन्टरको बैठकमा आचार्यको चर्को विरोध हुने गरेको बताइएको छ ।
युनियनमा पनि उस्तै